Baarlamaanka Hirshabeele Oo Saxeexay Mooshin Xilka Lagaga Xayuubinaayo Madaxweyne Cosbole – Heemaal News Network
Wararka ayaa sheegaya in xalay illaa shalay ay Xildhibaanada wadeen kulamo gaar gaar ah iyo is dhaarsi, ku aadan sidii mooshin ay saxiixeen xildhibaano gaaraya konomeeyo ay u diyaarin lahaayeen.
Qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Cosoble inuu ku xad gudbay dastuurka, keligiisna iska gaaro go’aanada, isla markaana aan la tashi la sameyn maamulka.
Warar kuwaas ka madax banaan oo loo soo gudbiyey wakaaldada wararka ee Heemaal News ayaa sheegaya in Mooshinka laga diyaariyay madaxweyne Cosoble ay illaa haatan saxiixeen 40 meeyo Xildhibaan, waxaana la filayaa in maanta loo gudbiyo Guddoonka Baarlamaanka.
Dhowr jeer oo hore ayaa xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelele ay mooshin ka diyaariyeen Madaxweynaha oo ay haddana dib uga laabteen, kaddib wada hadalo lala galay.
Doorashada Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa lagu wadaa inay goor dhow ka bilaabato magaalada Jowhar, iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay. Guddiga doorashada Madaxweynaha ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay ugu jira in doorashada ay bilaabato saacadaha […]
Khudbadaha Musharaxiinta Madaxweynaha Hirshabelle Oo Jowhar Lagu soo Gabagabeeyay(Sawiro)
Magaalada Jowhar waxaa maanta ku soo dhamaanaya khubadaha musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, doorashada la filayo in ay dhacdo 16ka bishan maalinta Sabtida ah. Ilaa Siddeed musharax ayaa u taagan qabashada xilka madaxweynaha […]
Madaxweynihii Xilka Laga Qaaday Ee Hirshabeelle Oo Gaadhay Magaladda Beledweyne.
Madaxweynihii Baarlamaanka Hirshabeelle uu xilka ka qaaday dowladda Federaalkana ay ku raacday, ayaa maanta gaaray Magaalladda Beledweyne ee xaruunta Gobolka Hiiraan, Cali Cabdullahi Cosoble, oo ay la socdaan xubno isaga taabacsan ayaa Beledweyne lagu wadaa […]